Gorsa namoota dhukkuba 'Asmii' qabaniif dhukkuba COVID-19 ilaalchisee. Oromia Shall be Free |
bilisummaa March 30, 2020	Comments Off on Gorsa namoota dhukkuba ‘Asmii’ qabaniif dhukkuba COVID-19 ilaalchisee.
Previous (OROMUMMAA fi SABBOONUMMAA) / (ITOOPHIYUMMAA fi AMAARUMMAA)
Next Caqasi Leenjii Bilxiginnaa!
Ummata keenna kan baadiyaatiif 1. Gabaa loonii dhiisaa( obsaa). Namni daldala looniitiif dhufu hedduun magaala …